Shaft Induction Hardening Equipment ၏မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုဖြစ်စဉ်
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction ခိုင်မာစေ / ရိုးတံသော induction ခိုင်မာပစ္စည်းကိရိယာများ
Categories: induction ခိုင်မာစေ, induction ခိုင်မာစေစက် Tags: induction ခိုင်မာစက်ကိုဝယ်ကြလော့, သော induction တင်းမာ, induction hardening device ကို, induction ခိုင်မာပစ္စည်းကိရိယာများ, induction ခိုင်မာသည့်စနစ်, ခိုင်မာသည့် induction shaft, မျက်နှာပြင်တင်းမာ, ရိုးတံခိုင်မာစက်, ရိုးတံတင်းမာဖြစ်စဉ်ကို, ရိုး induction ခိုင်မာ, ရိုး induction ခိုင်မာပစ္စည်းကိရိယာများ, ရိုး induction ခိုင်မာစက်, ရိုး induction ခိုင်မာ system ကို, ရိုး induction အပူပေးစက်
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Surface Shaft induction Hardening Equipment
induction တင်းမာ အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်onlyရိယာတစ်ခုတည်းကိုသာအပူပေးရန်လိုအပ်သောမျက်နှာပြင်များနှင့်ရိုးတံများမာကျောသော / အအေးခံခြင်းအပြင်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္partsာန်များကိုအသုံးပြုသည်။
၏လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း၏ရွေးချယ်မှုမှတဆင့် သော induction အပူ system ကို, ထိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အတိမ်အနက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
ထို့အပြင်၊ areaရိယာကိုလေထဲတွင်မာစေခြင်း၊ ရေနှင့်အထူးခိုင်မာသော emulsion ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အအေးခံကိရိယာပေါ်တွင် မူတည်၍ မာကျောမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။
ရိုး induction ခိုင်မာ တစ် ဦး ကို manual သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခိုင်မာစေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိပါသည်။
အမျိုးမျိုးသော workpieces များမာကျောစေရန်နှင့်အပူချိန်ညှိရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ inaft hardening shaft, gears, guide rail, discs, pin နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ။
၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ခိုင်မာစေခြင်း၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်းခိုင်မာခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ခိုင်မာစေရန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းခိုင်မာစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် (သို့) PLC နှင့်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အရာ ၀ တ္ထုတည်နေရာနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုကိုနားလည်ရန်အတွက် PLC နှင့် induction heating power supply ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဒေါင်လိုက် (ရိုးတံ၏ခိုင်မာခြင်း) + အလျားလိုက် (ဂီယာအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခိုင်မာစေခြင်း)
တင်းမာမှုတစ်ခုဖြစ်သည် HLQ သော induction အပူ ပါဝါစနစ်များရဲ့အဓိကလျှောက်လွှာဒေသများ။ ရာပေါင်းများစွာသောကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသောဖြေရှင်းနည်းများသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီးအများစုမှာမော်တော်ကားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်သည်။
မာကြောရန်အတွက် induction heat ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီးဖို၌, တူညီသောဖြစ်စဉ်ကိုနာရီသို့မဟုတ်ပင်ရက်ပေါင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ
အဖြေကတော့အပူကိုမြန်မြန်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာထူးခြားဆန်းကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မာကျောမှုကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူမီးဖို၌မာကျောမှုသည်အချိန်ကုန်ခြင်း (အပူဆုံးရှုံးခြင်း) နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုထဲသို့ဖြစ်စေ၊
ခိုင်မာမှုကို In-line ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်။
သင်သည်အရည်အသွေး၊ ပေးပို့ချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည် အစိတ်အပိုင်းများကီလိုဂရမ်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသက်သာစေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်အုပ်ချုပ်မှုပမာဏကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချလိုက်သည်။
HLQ သော Induction Heating Power Systems သည်မတူညီသော workpieces ၏ inductive hardening and tempering တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ Hardening စနစ်တစ်ခုစီ၏အဓိကအချက်မှာစက်မှုလုပ်ငန်း၏အဆင့်မြင့်သော induction frequency converter ဖြစ်သော HLQ Induction Heating Power Systems သော Induction Heat Power Source ဖြစ်သည်။ ဤချီးကျူးစရာကောင်းသော converters သည်အကောင်းဆုံးခိုင်မာသည့်ရလဒ်များကိုတစ်ရက်ပြီးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်
အဆိုပါ induction ခိုင်မာစက် ဒေါင်လိုက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၊ အလျားလိုက် (အလယ်ဗဟိုမရှိ) စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်စက်များ - နှင့်ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းအင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကျယ်ပြန့်သောစီးရီးနှင့် / သို့မဟုတ်အပြိုင်လျော်ကြေးပေးထားသောသော induction power ရင်းမြစ်များပါ ၀ င်သည်။
ဒီစီးရီးခိုင်မာစေစက်ကိုဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ပြိုင်နက်, အပိုင်း - စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်ကဏ္-- silultaneous quenching လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်, ကအဓိကအားဖြင့်ရိုးတံ, discs တွေ, တံသင်နှင့်ဂီယာ၏ induction quenching အတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်မြင့်မားသောသတ်တိတိကျသဖြင့် featured ။ အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း၊ superaudio ကြိမ်နှုန်း၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်နှင့်အလွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction heat machine နှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုသော hardening machine tool ။
CNC သတ်စက် / မာကြောစက် tool ကိုအင်္ဂါရပ်:
CNC စနစ် - ကြိမ်နှုန်းမြင့်သတ်နိုင်သောစက် CNC စနစ်သည်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောအဆက်အခတ်ဖြစ်သည့်အစီအစဉ်များကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
HMI - ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားနှင့်လူ့စက်မျက်နှာပြင်ကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာတို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ထိန်းချုပ်မှုကိုချိန်ညှိသည်။ ၎င်းသည်စတင်ရန်၊ ရပ်တန့်ရန်၊ အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အပူနှင့်အအေးအချိန်၊ အလှည့်အပြောင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအမြန်နှုန်းတို့အတွက်အပူစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ထိပ်တန်းညှိနှိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများ - အမျိုးမျိုးသောအရှည်အလုပ်အပိုင်းအစ၏ညှပ်ကိုနားလည်ရန်လျှပ်စစ်ညှိနှိုင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
အလုပ်စားပွဲစနစ် - မောင်းနှင်ရန်ဘောလုံးဝက်အူနှင့် servo မော်တာကို အသုံးပြု၍ အလင်းကိုမောင်းနှင်ခြင်း၊
Main shaft rotation system: အစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းညှိသည်။
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်း - စက်ကိရိယာတွင်စွမ်းအင်ချို့တဲ့သောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ရှိပြီးမြင့်မားသောလုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။
Frame - အထူရှိသောသံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြတင်းပေါက်များနှင့်လျှောတံခါးများဖြင့်ရေဖြန်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
CNC ဒေါင်လိုက် induction hardening / queching machine tool ကို
ကွဲပြားခြားနားသော workpiece ၏အဆိုအရဒေါင်လိုက်အမျိုးအစား, အလျားလိုက်အမျိုးအစားရှိပါတယ်,တံခါးပိတ်အမျိုးအစား, စိတ်ကြိုက်အမျိုးအစား, etc
1.Standard SK-500/1000/1200/1500 workpiece ရွေ့လျားမှုအမျိုးအစားခိုင်မာသောရိုးတံ, discs တွေကို, တံသင်နှင့်ဂီယာအဘို့
2.SK-2000/2500/3000/4000 Transformer ရွေ့လျားသည့်အမျိုးအစား၊ အရှည်အားမီလီမီတာ ၁၅၀၀ ထက်ပိုမိုသောအပူချိန်အတွက်အသုံးပြုသည်
၃။ ပိတ်ထားသောအမျိုးအစား: ကြီးမားသောရိုးတံအတွက်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားသော၊
5. Customized အမျိုးအစား
ပုံစံ SK ကို-500 SK ကို-1000 SK ကို-1200 SK ကို-1500
အပူအမြင့်ဆုံး （mm） 500 1000 1200 1500
အပူအမြင့်ဆုံးအချင်း （mm （ 500 500 600 600
အမြင့်ဆုံးကိုင်ထားနိုင်သောအရှည် （mm） 600 1100 1300 1600
အပိုပစ္စည်း၏အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ်） 100 100 100 100
အပိုပစ္စည်းလည်ပတ်မှုအရှိန် speed r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
workpiece ရွေ့လျားမြန်နှုန်း （mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
နည်းလမ်းအေး Hydrojet အအေး Hydrojet အအေး Hydrojet အအေး Hydrojet အအေး
input ဗို့ 3P 380V 50Hz ဖြစ်သည် 3P 380V 50Hz ဖြစ်သည် 3P 380V 50Hz ဖြစ်သည် 3P 380V 50Hz ဖြစ်သည်
မော်တော်ပါဝါ 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
အရွယ်အစား LxWxH (mm) 1600 x800 x2000 1600 x800 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3200
အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ် 800 900 1100 1200
ပုံစံ SK ကို-2000 SK ကို-2500 SK ကို-3000 SK ကို-4000
အပူအမြင့်ဆုံး （mm） 2000 2500 3000 4000
အပူအမြင့်ဆုံးအချင်း （mm （ 600 600 600 600
အမြင့်ဆုံးကိုင်ထားနိုင်သောအရှည် （mm） 2000 2500 3000 4000
အပိုပစ္စည်း၏အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ်） 800 1000 1200 1500
အထည်အလှည့်အရှိန်နှုန်း speed r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
မော်တော်ပါဝါ 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
အရွယ်အစား LxWxH (mm) 1900 x900 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3400 1900 x900 x4300
အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ် 1200 1300 1400 1500
CNC ရိုးတံခိုင်မာစက် tool ကိုအင်္ဂါရပ်:
1.CNC စနစ်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မာသောစက် CNC စနစ်သည်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုများလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောမီးရှူးဖြစ်စဉ်ပရိုဂရမ်များကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
3. Controll adjust: ၎င်းသည်စတင်ရန်၊ ရပ်တန့်ရန်၊ အပူပေးသောနှင့်အအေးခံရန်အချိန်၊ အလှည့်အပြောင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအမြန်နှုန်းတို့အတွက်အပူစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
စားပွဲစနစ် - မောင်းနှင်ရန်ဘောလုံးဝက်အူနှင့် servo မော်တာကို အသုံးပြု၍ အလင်း၊ ကားမောင်းခြင်း၊ တိကျမှန်ကန်သောနေရာချထားခြင်း။
7.Main ရိုးတံလည်ပတ်မှုစနစ်: စဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိအစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်မြန်နှုန်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ထိန်းညှိ variable ကိုအကြိမ်ရေချမှတ်။
၈။ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်း - စက်ကိရိယာတွင်စွမ်းအင်ချို့တဲ့သောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှု။
၉။ ဘောင် - သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြတင်းပေါက်များနှင့်လျှောတံခါးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ရေဖြန်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည် သော induction တင်းမာ ဖြစ်စဉ်ကို။
induction ခိုင်မာဓား Blade ကို
ခိုင်မာသောသံမဏိ Cam ညီလာခံ
Induction အပူပေးစနစ် Topology ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
အလူမီနီယံပြားများ၏ Induction အပူပေးခြင်း
သံလိုက်မဟုတ်သော cylindrical ingots များ၏ Induction အပူပေးခြင်း
Induction Hot Forming Steel Pipe ၊
Induction Hardening နှင့် tempering
Induction Wire နှင့် Cable အပူပေးခြင်း
သော induction တင်နိုင်
တိမ်းစောင်း အရည်ပျော် အလူမီနီယမ် Induction မီးဖို
RPR Induction Pipeline Coating Removal စနစ်
RPR Induction Coating ဖယ်ရှားရေး အပူပေးစက်